Re ahịa maka ndị na-ege ntị Cross-Platform | Martech Zone
88% nke ndị America nwere ma ọ dịkarịa ala ngwaọrụ 2 jikọtara na ịntanetị na 90% nke ndị America na-eji ọtụtụ ngwaọrụ eme ihe n'ụzọ zuru oke n'ụbọchị. Maka ndị na-ere ahịa, nke a na-enye ma ihe ịma aka na ohere ịhazi na saturate ndị na-ajụ ase ebe ndị na-ege ntị nọ… ma hụ na ha leverage nke ike nke ngwaọrụ ha na-ekwurịta.
a ozi sitere na Uberflip na-enyocha eziokwu - nke ihe omume igwe mmadụ dị na ngwaọrụ, oge ole ha na-etinye na ha, yana ihe ndị ọkachamara na-ekwu - yabụ ị nwere ike imeghari ma mee ka atụmatụ ọdịnaya ekwentị gị dị elu. Gbanye na ịga n'ihu na-agbada maka ịmegharị isi nchọta anyị.
Tags: ụgwọ dugganobe-ikpo okwungwaọrụ multi-taskingmultitasking ngwaọrụgoogle +heidi cohenekwentị mkpanaakaneal mohanikiri TVuberflip
Usoro Leger: Voice of Customer (VoC) Reportable Report